ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသာကြီး)က ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့ လုပ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသာကြီး)က ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသာကြီး)က ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်
Posted by လင်းဝေ on Aug 23, 2010 in Myanma News | 10 comments
မေးလ်ထဲကို ပို့လာတာပါ။ ပို့ပေးတဲ့သူက တော်ရုံတန်ရုံ လျှောက်ပို့တတ်တဲ့သူမဟုတ်လို့ ယုံကြည်မိသလို အဲဒီ ပါမောက္ခချုပ်ဆိုပြီး ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုမြန်မာပြည်ထဲ ဘယ်နားက ကောက်တပ်လိုက်မှန်းမသိတဲ့ သူအကြောင်းကောင်းကောင်းလည်းသိနေမိလို့ တင်လိုက်ပါတယ်။YECO/ YCEO ကိုတော့ ဘာအတိုကောက်မှန်းမသိပါ။ ထင်တာတော့ Yangon Eco ကိုပြောချင်နေတာနေမှာပါ။ ကျနော်တို့တုန်းကတော့ YIE ပါပဲ။ Yangon Institute of Economics ပါပဲ။
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (ရွာသာကြီး) YECO တွင် ၂၉.၇.၂၀၁၀ နေ့ တွင် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲကျင်းပပါသည်။မိုးသည်းထန်စွာရွာသဖြင့်အနည်းငယ်သာစိုက်ပျိုးဖြစ်ပါသည်။ ၃၀.၇.၂၀၁၀ နေ့ တွင်ပါမောက္ခချုပ်နှင့်ဝန်ထမ်းထုတွေ့ ဆုံပွဲတွင် ယခုတက္ကသိုလ်၏အကြီးဆုံးသော ပါမောက္ခ ချုပ် ဒေါက်တာကံဇော် သည် ၃၁.၇.၂၀၁၀(စနေနေ့ )နှင့် ၁.၈.၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ) နေ့ တွင် YCEO ရွာသာကြီးနယ်မြေဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင်နေထိုင်သော ဝန်ထမ်းအယောက်သုံးဆယ်အား
ကျန်ရှိသောသစ်ပင် ၂၀၀၀ အား တစ်အိမ်ထောင်လျှင် အပင်ရှစ်ဆယ်နှုန်းဖြင့်စိုက်ပျိုးရန် မှာကြားခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းအ်ိမ်ရာနေ မိသားစုများထဲတွင် နယ်မြေငှာနမှ အလုပ်သမားမှူး ၏ မိသားစုလည်းပါဝင်ခဲ့သည်။၁.၈.၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ) နေ့နံနက် ကိုးနာရီမိနစ်နှစ်ဆယ်တွင်အလုပ်သမားမှူး၏သားဖြစ်သူ မောင်…….. လယ်ကွင်းထဲတွင်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေစဉ်တွင်မြွေကိုက်ခံခဲ့ရပါသည်။
ဦး………၏သားထိုမြွေကိုက်ခံရသူမောင်……….အားကျန်သောအပင်စိုက်နေသောဝန်ထမ်းများက ထမ်းပိုးကာဆေးရုံသို့ ပို့ ရန် ကျောင်းရှေ့တွင်ကားကြုံရရန် ၁နာရီခန့် စောင့်ရပါသည်။ပထမကားတစ်စီးသည်လူမဆန်စွာသဖြင့်မတင်ခေါ်ဘဲထားခဲ့ပါသည်။ဒုတိယကားမှ စေတနာကောင်းစွာ သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီးအထိလိုက်ပို့ ခဲ့သည်။ မောင်……၏မိသားစုတွင်ဆေးကုသရန်ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်းစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှမထောက်ပံ့ခြင်းတို့ ကြောင့်ဆေးရုံတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာ ၂.၈.၂၀၁၀ နံနက် ရှစ်နာရီခွဲတွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။
၄.၈.၂၀၁၀ တွင်ရေးဝေးသုသာန်တွင် သဂြိုလ်ခဲ့ရာ အခန်းငှားခ -ရေခဲတိုက်ထားခ-အလောင်းသယ်ယူခ-မီးသဂြိုလ်ခ ကျပ်ငွေခြောက်သောင်းကုန်ကျပါသည်။
ထိုကလေး၏အသုဘတွင် ရေဝေးသွားရန် YECO မှ ကားတစ်စီးသာပေးပါသည်။မလုံလောက်သဖြင့်ပြင်ပမှ ကားတစ်စီးလျှင် တစ်သောင်းခွဲကျပ်ဖြင့် ကားသုံးစီးထပ်မံငှားရမ်းရသဖြင့် လေးသောင်းခွဲ ကုန်ကျပါသည်။
၅.၈.၂၀၁၀ တွင် YECO ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ကံဇော် က မောင်………အတွက်အသုဘကူငွေများကို သင်ကြားရေးနှင့်စီမံငှာန အရာရှိများက ကောက်ခံကာ ရငွေများကို သူ ၏ထံလာအပ်ရန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုကလေးအတွက်ကူငွေ သည် နှစ်သိန်းခွဲတိတိရရှိပါသည်။ ထိုငွေထဲမှ တက္ကသိုလ်မှ စိုက်ထားငွေ တစ်သိန်းငါးထောင် ကျပ်ကိုနှုတ်ယူခဲ့ပါသည်။ ကျန်ငွေတစ်သိန်းလေးသောင်းငါးထောင်ကျပ်ထဲမှရက်လည်ပြုလုပ်ရန်အတွက်
အလုပ်သမားမှူးဦး……..၏မိသားစုထံသို့ငါးသောင်းကျပ်တိတိသာပေးပါသည်။ ကျန်ငွေကိုထိုပါမောက္ခချုပ်မှယူထားပါသည်။(ဘာလုပ်ဖို့ လဲမသိပါ)
YECO ရွာသာကြီးတွင် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲပြုလုပ်ရာတွင် သားတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့သောငွေကြေးမပြည့်စုံသည့် အလုပ်သမားမှူးဦး……..မိသားစုသည် အသုဘကူငွေမှလည်းဖြတ်တောက်ခံရသည့်အတွက် ဒုက္ခ
ပင်လယ်ဝေနေကြပါသည်။ ငိုကြွေးရုံမှတစ်ပါးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါ။ နစ်နာကြေး-ထောက်ပံ့ကြေးမရရှိသည့်အပြင် အသုဘကူငွေမှဖြတ်တောက်ခံရပါသည်။ထိုရန်ကုန် စီးပွါးရေးတက္ကသိုလ် ၏ပါမောက္ခချုပ်ဦးကံဇော် က ထိုမိသားစုနှင့် ကျောင်းမှ ဝန်ထမ်းများ အား ကျောင်းကနေ (ဘာမှမျှော်လင့်မနေနဲ့ ဆရာတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိတွေကျောင်းမှာ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်မယ်။အသုဘလိုက်ပို့ စရာမလိုဘူး) ဟု အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်၊ ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ် ဖုံးဖိပြီး အောက်ကလူတွေကို ဖိဟောက်တာကောင်းကြသေးရဲ့လား။ အသုဘ ကူငွေကိုတောင် ဖြတ်သိမ်းထားလိုက်သေးတယ်တဲ့ကွယ်တို့။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။
မသေပဲ သေတယ်တော့ ပြောမှာ မဟုတ်သလို လိုအပ်တာလေး လုပ်မပေးတော့ ကြားတဲ့သူက မခံနိုင်လို့ ထဖွတာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဪ..ပါမောက္ခချုပ်..ချုပ်..ချုပ်…ချုပ်ချက်ကကြောက်စရာ အသုဘကူငွေတောင်မချန်ချင်ဘူး ဒီလိုအကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပါမောက္ခချုပ်လုပ်နေတာ ရှက်တတ်ရင်လဲသေသင့်ပီ
ရေဆိုတာ မြင့်ရာကနေ နိမ့်ရာကို ဆင်းသလိုမျိုးဘဲ အကျင့်ဆိုတာ လည်း ဒီလိုဘဲနေမှာ။
အမှန်တကယ် သူလုပ်ခဲ့တာ ဆိုရင် ၀ဋ် ပြန်လည်မှာပေါ့ ။
အင်းးးးးးးးးးးးပညာရေးမှာလည်း ဒါမျိုးတွေ ရှိတယ်လား?
ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဓါတ်က နိမ့်ကျလှချည်လား ။ အင်းလေ …တကယ်တတ်တာက ပညာမှမဟုတ်ဘဲ သင်ညာကိုး။
၀ဋ်လည်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ် ။
လူတယောက်လုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာတောင် အသုဘ ငွေဖြောင်ထားခဲ့တဲ့ ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်က သန့်ရှင်းရေးသမားလောက်တောင် အသုံးမကျပါဘူး ။ ဒီကိစ္စအမှန်သာဆိုရင် လူ့ အသိုင်းဝိုင်းက သိအောင်အားလုံး ကော်ပူးကူးပြီးမေးလ်ကနေ ဖြန့်ဝေသင့်တယ် ။
နောက်ဘဝကျရင်လူဘဝပြန်မရောက်ကျတော့မယ့် နေပြည်တော်ကစစ်ခွေးတွေ နားကန်းနေကျလား……
စားပါစေ ဒီ အသုဘကူငွေတွေ
In Burma, the chief general Than Shwe is murderer, genocidal, racial terminator, bandits and criminal against humanity. All the officers above the level of managing directors are split-image quality of Than Shwe. I do not surprise to hear this story in Burma. If I heardageneral is giving his wealth to the poor in the community, I am sure it isaas story, not the real life situation.
အင်း.. ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲတွေပါဘဲလား